Tag: yum yum vidiyo | Martech Zone
Kpido: yum yum vidiyo
Mgbe anyị kwuru na vidiyo abụrụla akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị kwa ụbọchị, anyị anaghị egwu egwu. Anyị na-ekiri vidio dị na ntanetị kwa ụbọchị na kọmputa anyị, ekwentị anyị na Smart TV. Dabere na Youtube, ọnụọgụ nke oge ndị mmadụ na-ekiri vidio dị elu 60% afọ karịa afọ! Ederede edepụtara edezi edezi bụzi ihe mgbe ochie, ọ bụghị naanị anyị na-ekwu ya: Google bụ! Igwe ihe nchoputa nke # 1 nke ụwa na-enye nnukwu ọdịnaya vidiyo, nke nwere